ပွင့်လင်းဇယား Debugger / Simulator: Facebook က / တွစ်တာ / LINE / Hatena Bookmark များအတွက် | RAKKOTOOLS🔧
ပုံရိပ်, ဩဃ: ခေါင်းစဉ်နဲ့သြဃ: ဖော်ပြချက်ဩဃ၏အရွယ်အစားနှင့် display ကို Check
ပွင့်လင်းဇယား Debugger / Simulator | RAKKOTOOLS ဆွဲ-and တစ်စက်နှင့်အတူထို bookmark bar ကိုမှဒီ tool ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူ, ဘရောင်ဇာအောက်မှာ website တစ်ခု၏ပွင့်လင်းဇယား setting ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မျိုးစုံ URLs များကိုစစ်ဆေး
ပုံရိပ်စစ်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ရွေးချယ်ထား image ကိုအတည်ပြုပေးပါ။
အဆိုပါ setting သတင်းအချက်အလက်ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့။ URL ကိုအတည်ပြုပေးပါ။
ဆွဲယူ-and drop image ကို
သို့မဟုတ်ကဒီမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် image ကို select လုပ်ပါ
* အကြံပြုပုံရိပ် * အကျယ် 1200 ×အမြင့် 630 (အချိုး 1: 0.525) အလေးပေးဖို့ရာပုံ၏အလယ်၌သတ်မှတ်
ကို PC မှာ
RAKKOTOOLS | လွယ်ကူသော & အဆင်ပြေကို web tools များ
RAKKOTOOLS ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေကို web tools တွေကိုပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ-Up မပါဘဲအလိုလိုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုသုံးနိုင်သည်ကို web tools များ ပူဇော်. , ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားနေပါသည်!
ကို PC မှာကြီးမားသော
စမတ်ဖုန်း သည် app ကို
ကို PC မှာ, စမတ်ဖုန်း
သငျသညျတခါမှာ 50 ဓာတ်ပုံများကိုအထိရွေးနိုင်သည်။ RAKKOTOOLS | လွယ်ကူသော & အဆင်ပြေကို web tools များ RAKKOTOOLS ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေကို web tools တွေကိုပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ-Up မပါဘဲအလိုလိုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုသုံးနိုင်သည်ကို web tools များ ပူဇော်. , ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားနေပါသည်! တစ်ဦးချင်းစစ်ဆေး ယင်း setting သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်လုပ်လို့မရနိုင်ပါ။ URL ကိုအတည်ပြုပေးပါ။ ဩဃ: image ကိုမသတ်မှတ်ထားပါ ဩဃ: ခေါင်းစဉ်မသတ်မှတ်ထား ဩဃ: ဖော်ပြချက်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပါ အဘယ်သူမျှမပုံရိပ် URL ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ တစ်ကြိမ်ဖွင့်ဖို့ကို 50 URL များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းဇယား Debugger / Simulator တစ်ဦးချင်းစီ SNS နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ URL ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်, ပွင့်လင်းဇယားတွေနဲ့ shared ဘယ်လို
ဩဃဖေါ်ပြသည် Displaying ။ ပုံရိပ် / ဩဃ: ခေါင်းစဉ် / ဩဃ: တစ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ facebook ပေါ်မှာ shared ဘယ်လို preview ကိုအတွက်ဖော်ပြချက် / တွစ်တာ / LINE / Hatena Bookmark ။
အမျိုးမျိုးသော display ကိုအရွယ်အစား / ဇာတ်ကောင်အရှည်နှင့်အတူ PC ကွန်ပျူတာ, စမတ်ဖုန်းနှင့် app ရဲ့သူအပေါငျးတို့ဗားရှင်း Displaying ။
ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် display ကိုအတည်ပြုခြင်းအဘို့အ 50 ဓါတ်ပုံတွေကိုမှတက်အပ်လုဒ်တင်ခြင်း။ ဤရုပျပုံကိုပြသနေကြသည်ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးဝင်။ မျိုးစုံရုပ်ပုံများကိုပြသနေစဉ်, သင်ကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်နဲ့တိကျတဲ့ရုပ်ပုံပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
* Display ရဲ့အသီးအသီး SNS ရဲ့ Display ကိုနည်းလမ်း၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအမှန်တကယ်တဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်အံ့သောငှါနားလည်ပေးပါ။ တစ်ဦးဝက်ဘ်စာမျက်နှာ shared ပြီးတာနဲ့ * ပွင့်လင်းဇယား setting ကိုတစ်ဦး SNS အပေါ် cached ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုအတွက် display ကို (စသည်တို့ကိုဩဃပုံရိပ်, ခေါင်းစဉ်,) ကိုဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက် updated သည်မဟုတ်, အသီးအသီး SNS အပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း cache ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
Facebook ကို / LINE: Debugger ကန့်ကွက် - Facebook မှာ Developers
တွစ်တာ: Card ကိုအတည်ပြု | တွစ်တာ Developers
တစ်ခု OGP ကဘာလဲ?
OGP SNS အပေါ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့ contents သိရှိစေရန်တစ်ဦးသတ်မှတ်သည့်စနစ်ဖြစ်သောပွင့်လင်းဇယားပရိုတိုကော, ကိုဆိုလိုတာပါ။ ဝဘ်အကြောင်းအရာ shared အခါမှန်မှန်ကန်ကန်ပွင့်လင်းဇယား setting အသုံးပြုပုံတစ်သတ်မှတ်ထားသောပုံရိပ် / ခေါင်းစဉ် / ဖော်ပြချက်ပြသနေသည်။
တစ်ဦးဝက်ဘ်စာမျက်နှာ shared သောအခါ, ဩဃ: image ကိုပြသမှု၏ကြီးမားသောအဘို့ဖြည့်ပါ။ အဆိုပါဩဃ setting by: သင့်လျော်သောအရွယ်အစားပုံရိပ်မျက်စိ-ဖမ်း, ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ CTR နည်း / အမြင်များ၏နံပါတ်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်သောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဩဃများအတွက်
သင့်လျော်ပုံရိပ်: image ကို
မေလ, 2019 အဖြစ် * အကြံပြုပုံရိပ်တွေ *
1200 * 630 (အချိုး 1: 0.525)
အကြံပြုချက်များများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုစီကို SNS တစ်ခုပုံရိပ်နှင့်ပုံရိပ်ချုံ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အချိုးနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ ပုံရိပ်တွေ၏ * အချိုးအစား *
Facebook မှာ - 1: 0,522
တွစ်တာ (အကြီးစား), ကို PC ဗားရှင်း - 1: 0,502 / စမတ်ဖုန်းဗားရှင်း - 1: 0,524
Hatena Bookmark, PC ကိုဗားရှင်း - 1: 0,68 / စမတ်ဖုန်းဗားရှင်း - 1: 0.75
aspect ratio အကြာတွင်ရှည်လျားအများစုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာတစ်စတုရန်းပုံရိပ်ဩဃအသုံးပြုသည်: image ကိုထိပ်တန်းနှင့်အောက်ခြေလှီးဖြတ်နေကြသည်။ ဩဃ: image ကိုသတ်မှတ်ထိပ်တန်းနှင့်အောက်ခြေ, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလှီးဖြတ်နေကြသည်နှင့်အများနှင့်စတုရန်းထဲမှာဖော်ပြပါတယ်အတွက်: image ကိုဒေါင်လိုက် / အကြာတွင်ရှည်လျားဩဃတဲ့အခါမှာဒါတွစ်တာ (အကျဉ်းချုပ်), Hatena Bookmark app နဲ့ LINE ပေါ်စတုရန်းဖြစ်ပါတယ်။ * Image ကိုချုံ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် * ဩဃ: image ကိုတခါတရံ SNS အားဖြင့် compressed ဖြစ်ပါတယ်။ PNG တစ် Lossless compression format ကို (လုံးဝတန်းတူဖြစ်ချုံ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူဖြစ်စဉ်ကိုမီနှင့်ပြီးနောက်စေသည်ဒေတာချုံ့နည်းလမ်း) ဖြစ်ပါသည်ကတည်းက image quality ကိုမပြောင်းထားဘူး။
တစ်ဦးမှတ်ရန်ကဘာလဲ? တစ်ဦးကမှတ်ရန်သင်သည်သင်၏ bookmark ထဲကနေကိုသက်ဝင်နိုငျသောရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆွဲ-and တစ်စက်နှင့်အတူထို bookmark bar ကိုမှဒီ tool ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, ဘရောင်ဇာအောက်မှာ website တစ်ခု၏ပွင့်လင်းဇယား setting ကိုတစ်ကလစ်နဲ့ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
တခါမှာမျိုးစုံကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၏ Cheking ပွင့်လင်းဇယား setting ကို။
SEO ဆိုသည်မှာ ပုံစံ
HREF လင့်များ Extractor
ခေါင်းစဉ်နှင့် metadata များကို URLs မှထုတ်ယူပါ
ASCII အနုပညာ (AA) မီးစက်
ဗီဒီယိုမှ GIF ရုပ်သံပြောင်း
PDF Image ကို Extractor